Mareykanka: Cabsi laga qabo hoos u dhac dhaqaale | Baydhabo Online
Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa ka fakaraya tallaabooyin dhowr ah oo looga hortagayo hoos u dhac laga cabsi qabo inuu ku yimaado dhaqaalaha, inkasta oo madaxweyne Trump uu ku adkeysanayo in dhaqaalaha dalka uu caafimaad qabo.
Saraakiil ka tirsan Aqalka Cad ayaa ka fakaraya dhowr tallaabo si loo xoojiyo dhaqaalaha, waxaana ka mid ah in la dhimo canshuurta mushaaharka shaqaalaha, si loo baadiyo lacagta ay guriga u qaataan, waxaa sidaas weriyey Washington Post.
Tallaabo kale oo laga fakarayo ayaa iyana ah in dib looga laabto qaar ka mid ah canshuurtii dheeriga ahayd ee madaxweyne Trump uu saaray badeecadaha ka yimaada Shiinaha, sida uu qoraray New York Times.
Qorshahan ayaa weli ah mid horudhac ah, islamarkaana saraakiisha wada ayaan u keenin madaxweyne Trump, oo u baahnaan doona ansixinta Congress-ka, si loo fuliyo.
Aqalka Cad ayaa dood ka keenay warbixinadan wuxuuna bayaan uu soo saaray ku yiri “in la dhimo canshuurta dul saaran dakhliga soo gala shacabka, ma ahan wax iminka laga fakarayo.”
Trump ayaa Axaddii diiday wararka ku saabsan hoos u dhac kusoo socda dhaqaalaha Mareykanka, kadib markii dhowr xog ururin ay toddobaadkii tagay muujiyeen astaamo sidaas ah.
Daraasad lasii daayey isniintii, ayaa muujisay in inta badan dhaqaalyahannada Mareykanka ay filayaan hoos u dhac xooggan oo ku yimaada dhaqaalaha Mareykanka, labada sano ee soo socota gudahood.